Paranormal Agency: Iyo Ghosts yeWayne Mansion Yemahara kune Yakaganhurirwa Nguva | IPhone nhau
Paranormal Agency: Iyo Ghosts yeWayne Mansion Yemahara kune Yakaganhurirwa Nguva
MuApp Store tinokwanisa kuwana huwandu hukuru hwekushandisa nemitambo inotibvumidza kuti tiite chero zvese. Mune Actualidad iPhone tinoongorora iyo Apple application chitoro mazuva ese kutsvaga maapplication anowanikwa kwenguva pfupi kurodha mahara. Takambotaura nezvazvo WifiMan, PDF Mafomu y Tinya Chiremba, mamwe acho achiripo kuti utore mahara. Mukutanga kwema90, zvichikonzerwa nechikamu kune zvausingakwanise uye kufunga-kwe-iko kusiri iko kufunga kwevagadziri, mitambo mizhinji yakaita kuti ive yepasi rose PC yaive mitambo yemitambo.
Mugadziri G5, inotipa dzakasiyana siyana graphic adventures muApp Store apo patinogona kusimudzira hunyanzvi hwedu semuongorori. Nguva nenguva, uyu anovandudza anotipa mimwe mitambo yake yemahara kurodha pasi. Nhasi yave nguva yako kuParanormal Agency: Iyo Ghost yaWayne Mansion iyo yakazara vhezheni yemutambo.
Mumutambo uyu tichafanira isa masimba edu akaenzana pakuyedza mukuenderera mberi kunotonhora kweakakurumbira ekutsvaga kushanya Paranormal Agency. Nyaya yacho inoitika mune imwe imba yekare kumucheto kwemusha wakanyarara uyo unonzi une mweya yakaipa.
Vamwe vanhu vemuraini vanodaro vakanzwa kuchema uye kuchema, vamwe vakaona mimvuri muminda. Vanhu vemumusha vanotya kwazvo uye meya ari kutsvaga mhinduro uye nekuda kweizvi anotikoka isu semuvhimi anozivikanwa chipoko. Panguva yemutambo isu tinofanirwa kutsvaga kukona yega yega yeinotapira imba, tora zvinhu zvinobatsira uye kugadzirisa mapuzzle kuona kana paine zvipoko chaizvo kana iri jee rinoshanda.
Paranormal Agency: Iwo Midzimu yeWayne Mansion HD (Yakazara) inowanikwa muSpanish, saka mutauro hauzove chipinganidzo kana zvasvika pakunakidzwa nemutambo. Inotora zvishoma pasi pe850 MB, saka zvingangoita kuti iwe uchafanirwa kugadzira imwe nzvimbo pane yako iPhone kuti ukwanise kurodha pasi uye kunakidzwa nemutambo. Mutengo wakajairika wemutambo uyu i4,99 euros uye sekutaura kwandakaita mumusoro wenyaya, inowanikwa kurodha mahara kwenguva yakati rebei.
1 IPhone vhezheni
2 IPad vhezheni
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Paranormal Agency: Iyo Ghosts yeWayne Mansion Yemahara kune Yakaganhurirwa Nguva
Kubvira riini huremu hwefaira hunoratidzwa mumamirigiramu?
Bill Campbell, mumwe wevatevedzeri vaSteve Jobs, Larry Page naJeff Bezos, vanofa
Apple inomira kusaina iOS 9.3